musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Kufamba kuenda kuEurope munguva dze COVID
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • nhau • Portugal Kuvhuna Nhau • Kuvakazve • chengetedzo • Switzerland Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kunetsekana kutsva pamusoro pechipiri wave COVID-19 kwakauya apo Mutungamiriri weBritish, Boris Johnson, akamisa rwendo rwakarongwa kutanga kwesvondo rino.
UK yakaisa India parwendo rutsvuku rwekufamba nekuti mamirioni 1.6 hutachiona hutsva hwakataurwa muvhiki rimwe chete muIndia.
Turkey yezuva nezuva coronavirus hutachiona huwandu hwakwira pamusoro pe60,000.
Portugal yakatumidzwa kunzi coronavirus nyika yedambudziko apo pakupera kwaNdira, mazana masere nemakumi masere nesere nemasere emhosva dzakataurwa mumazuva manomwe - zvakapetwa ka878 kudarika kuGerman panguva iyoyo.
India yakarohwa ne COVID tsunami ine hutachiona hunopfuura mamirioni 1.6 mukati memazuva manomwe apfuura uye yakawedzerwa kuUK yekufamba "tsvuku runyorwa" pakati pekunetsekana pamusoro pemusiyano mutsva wakabuda munyika, nhepfenyuro yeBritain yakashuma.
Sarudzo yehurumende yeUK yekuisa India pa UK's coronavirus inofamba "tsvuku tsvuku" kwakauya sekushamisika, mutauriri webato rinotonga reIndia akadaro, achipindura "kune kushomeka kwedata" pane zvakasiyana muIndia. Nekudaro, iyo data inoratidza avhareji yemazuva ese ikozvino ingangoita mazana maviri nemakumi maviri ezviuru zvemakesi - inomhanya kwazvo COVID-220,000 yakapararira pasi rese.
Vakuru vehutano vekuUK vari kuongorora kuti a COVID musiyano kutanga kuwanikwa muIndia inopararira zviri nyore uye kunzvenga majekiseni, BBC yakashuma Parizvino, iyo UK irikumhan'ara zana nemakumi masere nezviuru zvemamiriro matsva eIndia muUnited Kingdom. Zviyero zvakaoma zvaifanira kunge zvakatorwa kare kuitira kudzivirira kupararira hutachiona UK Vashumiri vakaudzwa.